नेपाली क्रिकेटरलाई आइपीएल खेल्ने मौका,को हुन् उनी ? - Nepal News - Latest News from Nepal
नेपाली क्रिकेटरलाई आइपीएल खेल्ने मौका,को हुन् उनी ?
By nepalnews	 On Mar 1, 2016
काठमाडौं । डडेल्धुरा आलितालका क्रिकेट खेलाडी दिलबहादुर बोहरा इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) खेल खेल्न पाउने भएका छन्। भारतको पञ्जाब क्रिकेट संघले उनलाई अन्तिम छनोटको लागि बोलाएको छ। छनोटको दुई चरण पार गरिसकेका बोहराको अब अन्तिम छनोट मात्र बाँकी छ। आगामी मार्च ४ देखि १३ तारेखसम्म मोहालीमा हुने अन्तिम क्याम्पमा सफलता हासिल गर्न सके खेलाडी बोहरा किङ्ग्स इलेवेन पञ्जाबबाट आइपीएल खेल्न पाउनेछन्।
सो टीमले बोहरालाई वार्षिक २५ लाख रूपैयामा अनुबन्ध गर्ने स्रोतले बतायो। ‘यदि बोहोरा अन्तिम क्याम्पबाट पनि छानिए भने उनलाई किंग्स इलेभेनले वार्षिक २५ लाख रूपैयाँमा अनुबन्धन गर्ने पक्का छ,’ स्रोतले भन्यो। उनलाई पञ्जाब क्रिकेट एसोशिएसनले एक पत्र पठाएर शुभकामना समेत दिदैं आइपीएलमा सहभागिताका लागि अन्तिम् छनोटसम्म पुग्ने पहिलो नेपाली क्रिकेट खेलाडी रहेको जनाएको छ।
पहिलो चरणको छनोटमा बोहराले ४२ बलमा ८४ रन र २ विकेट बटुलेपछि पञ्जाब क्रिकेट संघ उनको खेलबाट प्रभावित भएको हो। दोस्रो चरणको छनोट फिटनेशमा पनि उनले सफलता पाएका थिए। उनको अन्तिम छनोट पनि फिटनेश नै रहेको पञ्जाब क्रिकेट संघले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा आइपीएल एलेन पाउलको हस्ताक्षर रहेको छ।
नेपाली क्रिकेटमा गुमनाम बोहराको अधिकांश समय भारतमै बितेको छ। सात कक्षाको अध्ययनलाई बीचमै छाडेर कामको खोजीमा भारतको पञ्जाब पुगेका बोहरा त्यहाँ छँदा पञ्जाब क्रिकेटसँग नजिकिएका थिए।
यसअघि, धनगढी बसाईको क्रममा क्रिकेट खेल सुरुवात गरेका उनले यहाँ केहि प्रतियोगिता खेलेका छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि धनगढीमा भएको छनोट खेलमा उनले अविजित ५० रन बनाए पनि अन्तिम सूचीमा परेका थिएनन्। उनी क्षेत्रीय स्तरको प्रतियोगिताबाटै फालिएपछि विरक्तिएर भारत पुगेका थिए। त्यसैक्रममा भारतको पञ्जाब क्रिकेट एसोशिएसनले बोहराको प्रतिभालाई चिनेको हो।
पञ्जाब क्रिकेट संघबाट अन्तिम छनोटका लागि पत्र पाउनु आफ्नो खेल जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको बोहराले बताए। संघको त्यस्तो पत्र पाएका उनले अझै पनि नेपालको जर्सी लगाएर क्रिकेट खेल्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए। आगामी अप्रील ८ देखि मे २९ सम्म भारतमा आइपीएल सिजन सुरु हुदैंछ। (सभार : सेतोपाटी )
विश्वकपको विषयलाई लिएर भारतमा लफडा,रोकिएला पाकिस्तानसँगको खेल ?